တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: လွမ်းမပြေ ...
ခဏခဏ ဒီအကြောင်းချည်း ရေးနေတာပဲလို့ အပြစ်တင်လိုက တင်ကြပါတော့။
ဗီဒီယိုကြည့်မိလို့ သတိရတာနဲ့၊ မြန်မာနှစ် တနှစ်ပြည့်လို့ သတိရတာနဲ့ ခရစ်နှစ် တနှစ်ပြည့်လို့ သတိရတာနဲ့ .. တိုက်ဆိုင်မှုရှိလို့ သတိရတာနဲ့ ကျမကလဲ သူ့ကို ခဏခဏ သတိရနေမိလို့ပါ။ တနှစ်ဆိုတာ ကြာတယ်လို့ ပြောချင် ပြောလို့ရသလို မြန်တယ်လို့ပြောချင်လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော .. ဒီတနှစ်အတွင်းမှာ … ကျမရင်ထဲက ၀မ်းနည်းမှုတွေ နှမြောမှုတွေ လွမ်းဆွတ်မှုတွေကတော့ ပျောက်မသွားသေးပါဘူး။
ကြုံရင် ကြုံသလို သူ့ကို သတိရနေဆဲ။ သူငယ်ချင်းများများစားစား မရှိတဲ့ ကျမအတွက်တော့ သူဟာ ကျမရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသော… ကျမကို နားလည်ပေးနိုင်သော … ကျမကို သည်းခံနိုင်သော .. သူငယ်ချင်းကောင်း တယောက်ပါပဲ။
ဒီနေ့ သူ့ကိုရည်စူးပြီး အိမ်ရှေ့မှာကြွလာတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို သစ်သီးကပ်လှူပြီး အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း … တဆင့်ထက် တဆင့် မြင့်မြတ်ရာဘုံဘ၀ကို ရောက်ရှိပါစေ …. ။
အခု ဖော်ပြမဲ့ စာကတော့ .. မနှစ်က ကျမမွေးနေ့အတွက် သူက အမှတ်တရရေးပေးပြီး ပလန်းနက် ဖိုရမ်မှာ တင်ခဲ့တဲ့ စာလေးတပုဒ်ပါ။ တချို့လဲ ဖတ်ဖူးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သူဟာ ယောကျာ်းလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ကိုယ်သူ မိန်းမတယောက်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပလန်းနက် chat room နဲ့ ဖိုရမ်တွေမှာ နောက်ခဲ့ ပြောင်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ nick က vampire6ပါ။ သူ့ကို အများက မမဗန်လို့ခေါ်ကြတယ်။ သူနဲ့ သိပ်ရင်းနှီးလွန်းသူ တချို့သာ သူ့အကြောင်းသိပေမဲ့ အများကတော့ မသိကြပါဘူး။ သူကွယ်လွန်သွားပြီးမှသာ သိသွားကြတယ်။
သူ့ရဲ့ ရေးသားချက်လေးကိုဖတ်ကြည့်ရင် သူ့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို အနည်းအကျဉ်းတော့ ခန့်မှန်းနိုင်မှာပါ။
၂၁-၈-၂၀၀၅ ( တနင်္ဂနွေနေ့ )
ညီမလေး မေဓါဝီ အတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းကောင်းကောင်းလေး . .
(( ချစ်ညီမလေး အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ . . ))
((မွေးနေ့ရောက်တိုင်း သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ))
(( စိတ်ပုတီးကို လက်မှာကိုင်လို့ ကိတ်မုန့်များများ ခိုးစားနိုင်ပါစေ ))
(( ကြက်ဥကြော် ပလုတ်ပလောင်းနဲ့ အသက်လွတ်ရက်များစွာ ဆောက်တည်နိုင်ပါစေ ))
(( သားသမီးရတနာ များများ ထွန်းကားပါစေ ))
ဟိုက် . . ဒီတစ်ခုတော့ မှားသွားပြီ . .ဆောရီး .ဆောရီး .
မွေးနေ့ နဲ့ မင်္ဂလာဆောင် .. ဟီး . .
တော်ကြာ ညီမလေးကို အိမ်ထောင်ရှင်လို့ ထင်သွားကြဦးမယ် . .
ကောက်နဲ့နော် . . မမက အလကား စ တာ . .
မမပို့လိုက်တဲ့ လက်ဆောင်လေး ရတယ် မဟုတ်လားကွယ် . .
ကြိုက်ရဲ့လား . .
မမက နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ မမရဲ့ အကိုကို တောင်းပန်ပြီး ပို့ခိုင်းလိုက်ရတယ် . .
ကိုယ်တိုင်မလာလို့ဆိုပြီး နှုတ်ခမ်းကြီး စူမနေပါနဲ့နော် . .
ညီမလေး ပေးလိုက်တဲ့ မုန့်တွေက အရမ်းစားလို့ကောင်းတာဘဲ . . သိလား . .
ညီမလေး အတွက် လက်ဆောင်သွားဝယ်တဲ့ အကြောင်းလေး . ပြောပြရဦးမယ် . .
နေရာက အားလုံး သိကြတဲ့ ရွှေဘုံသာလမ်း . .
ဆိုင်ထဲဝင်သွားတော့ ဦးလေးကြီး တစ်ယောက်ထိုင်နေတာ တွေ့တယ် . .
သူက ဘာမှ မပြောဘူး .
မမကလည်း ဘာမှ မမေးသေးဘဲ အရုပ်တွေ လျှောက်ကြည့်နေတယ် ..
ဟိုဟာကိုင် ဒီဟာကိုင်နဲ့ပေါ့ . .
ခဏနေတော့မှ သူက မျက်လုံးကြီး ပြူးကြည့်ပြီး . .
‘ဘာလိုချင်သလဲ . ခလေးမ’
‘ဘာလိုချင်ရမှန်း မသိသေးပါဘူး . . ဘယ်လိုဟာမျိုးဝယ်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတာ’
‘ခလေးမရဲ့ ကလေးက အသက်ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ . ငယ်ဦးမယ် ထင်တယ်’
‘အို . . ကျွန်မ ကလေး မဟုတ်ပါဘူး . . သူများ ကလေးကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ပါ’
ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ရှက်ပြီး ယောင်ယောင်မှားမှား ဖြေလိုက်တယ် ..
ဟုတ်တယ်လေ . . ဒီက အပျိုလေး . နုနုလေးကို . . ကလေး အမေနဲ့ မှားရတယ်လို့ . .
မျက်စိ တော်တော် မှုန်တယ်ထင် . . သူ့မျက်မှန်က အထူကြီး . .
‘သြော် . စိတ်မရှိပါနဲ့ကွယ် . . အိမ်ထောင်မကျသေးဘူးလို့တော့ ထင်သား . . ဟီး ဟီး . .
ကလေးက လေးဖက် သွားပြီလား’
မမက ညီမလေး ကြမ်းတိုက်တာကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပြီး . .
‘တစ်ခါတစ်လေတော့ လေးဖက်သွားပါတယ် . များသောအားဖြင့်တော့ မတ်တပ်ဘဲ’
ရှက်နေတာ မပြီးသေးလို့ ပေါက်ကရတွေ ပြောနေမိတာ . .
‘ဒါဆို လမ်းလျှောက်တတ်ခါစပေါ့ . . ဒီ စက်ဘီးလေး ၀ယ်ပေးလိုက်လေ’
ကလေးစီး သုံးဘီးစက်ဘီးလေးကို ပြရင်း ဦးလေးကြီးက ပြောတယ် . .
‘ဒါနဲ့ ဆန့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ဦးလေးရယ် . . သူလမ်းလျှောက်တတ်တာကလည်း ကြာလှပြီ’
‘ဒါဆိုဒီ သေနတ်ကလေး ၀ယ်ပေးလိုက်ပါလား . . နောက်ဆုံးရောက်တာလေ . .
လေဆာပွိုင့်တာပါတယ် . .’
စပ်ဖြီးဖြီးကြီး လုပ်ပြီး ကော်စေ့ထည့်ပစ်ရတဲ့ သေနတ်လေး တစ်ခု ယူပြလေရဲ့ . .
‘အာ . မဖြစ်သေးပါဘူး . . မျက်စိတွေမှန်ကုန်လို့ ကန်းနေပါဦးမယ်’
‘ဒါအတွက် ဘာမှ မပူနဲ့ . . ဒီမှာ မျက်စိမထိအောင် ကာဗာ ရှိတယ်’
သူပြောတဲ့ ကာဗာ ဆိုတာ ရေကူးမျက်မှန်နဲ့ တူတဲ့ ဆေ့ဖ်တီး ဂလတ်စ် . .
‘သူ့ အဖေ အမေကို ဒါကြီးတွေ ၀တ်ပေးထားရမှာပေါ့နော် . .’
‘မဟုတ်ဘူးလေ . . ကလေး ၀တ်ဖို့ . . လူကြီးတွေက ဒါဝတ်ပြီး ဆော့စရာမှ မဟုတ်တာ’
‘ကလေးကလည်း သူ့မျက်စိ သူပြန်ပစ်ပြီး ဆော့မှာမှ မဟုတ်တာ . . ပစ်မယ့်ပစ် သူများဘဲပစ်မှာပေါ့ . .
နောက်ပြီး သူက မိန်းခလေး’
‘မိန်းခလေးလား . . ဒါဆို . . ဘိုမရုပ်လေး ပေးလိုက် . . သီချင်းဆိုတယ် . . ကတယ်’
‘အဲဒီအရုပ်လည်း သူကြိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး . .’
‘ဒါဆို .. မီးရထားလေးရော . . ဘူတာရောက်ရင် ရပ်တယ် . . ဥသြဆွဲတယ်’
‘ခလေးမ မကြိုက်ပေမယ့် ဟို ကလေးလေးက ကြိုက်ချင်ကြိုက်မှာပေါ့’
‘ကျွန်မ မကြိုက်ရင် သူလည်း ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး’
‘ဒါနဲ့ . သူများကလေးဆို’
‘သူများကလေးဆိုတော့ ဘာဖြစ်သလဲ . .’
‘ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး . . ဒါဆို အဝေးထိန်း မော်တော်ကားလေးယူပါလား’
‘မယူဘူး . . အဲ . . ဟိုမှာ တင်ထားတဲ့ ၀က်ဝံရုပ်လေး ခဏပြ’
မမက အဖြူရောင် ၀က်ဝံရုပ်လေးကို သဘောကျသွားတယ် . .
ဒါလေးဆို ၀ီ က ကြိုက်မှာ . .
သူပြောတဲ့ ဈေးရဲ့ တစ်ဝက်လောက်နဲ့ ငွေပေါ်လျှော့ဈေးဆိုပြီး ရောင်းလိုက်လေရဲ့ ..
မွေးနေ့မှာ ၀ီ့ကို ပေးမယ်ဆိုပြီး အားခဲထားတာ . .
မမက ရုတ်တရက် နေမကောင်းထဖြစ်တာနဲ့ မလာနိုင်တော့ဘူး . .
မမရဲ့ အကိုပြောပြတဲ့ ၀ီ နဲ့ တွေ့တဲ့အကြောင်းလေးကို မွေးနေ့ အမှတ်တရ ရေးပေးလိုက်တယ်နော် . .
မမပြန်ရေးတာနဲ့စာရင် သူကိုယ်တိုင်ပြောသလိုမျိုးက ပိုဖတ်လို့ကောင်းမှာမို့ အဲလိုပဲ ရေးပေးလိုက်တယ် . .
(ရွှေဥဒေါင်း စတိုင်လေ . . ဟဲ ဟဲ )
ကျွန်တော့် ညီမလေးက သူငယ်ချင်းရဲ့ မွေးနေ့အတွက် လက်ဆောင်လေး ပို့ပေးပါဆိုလို့ သူပေးတဲ့ လိပ်စာအတိုင်း သွားခဲ့တယ် . .
ခြံဝမှာ ဘဲလ် တီးလိုက်တော့ . .
ပါးဖေါင်းဖေါင်းနဲ့ ချစ်စရာ ကောင်မလေး တစ်ယောက် ကိုင်းကျိုးနေတဲ့ ထီးစုတ်လေးကို ဆောင်းပြီး
စပ်ဖြဲ စပ်ဖြဲနဲ့ ထွက်လာတယ် . .
‘ဒါ မေဓါဝီရဲ့ အိမ်ဟုတ်ပါသလား’
သူက ပြုံးပြုံးလေး ဖြေတယ် . .
‘မေဓါဝီကို ခဏလောက် ခေါ်ပေးလို့ရမလား’
‘ဟင် . . ဘာမလိုတာလဲ . အကိုက မေဓါဝီကို ပေးစရာရှိလို့ပါ . .
နောက်ပြီး သူ လက်မှတ်ထိုးရမှာမို့လို့ လိုပါတယ်’
‘မလိုပါဘူးဆိုတာ မေဓါဝီက သမီးမို့လို့ ခေါ်ပေးစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောတာပါ . .’
ကောင်မလေးက ကျွန်တော့် လေယူလေသိမ်းကို အတုခိုးပြီး မျက်လုံးလေးဝင့်ကာ ရှင်းပြတယ် . .
‘သြော် .သြော် . . အကို့ကို မေဓါဝီအတွက် . . အက် .. အက် . . အက် ..’
‘မမဗန်က လက်ဆောင်ပို့ခိုင်းလိုက်တာ မဟုတ်လား . . သိပါတယ် ..ပေး . ပေး . .’
သူက ကြားဖြတ်ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ တန်းလန်းကြီးဖြစ်သွားတော့ ရီနေသေးတယ် . .
‘ဒီတိုင်းပေးလို့ မဖြစ်ဘူးလေ . . စကားဝှက်ပြောဦး’
‘အင်း . . ဒါလေးများ . . သစ်ကုလားအုတ်ဥ’
‘အွန် . . မှားပြီ’
‘ဘယ်မှာ မှားလို့လဲ . . သမီး သေချာမှတ်ထားတာကို’
‘အကိုကလည်း သေချာ မှတ်လာတာပါ . . အဲဒီ သစ်ကုလားအုတ်ဥတော့ မဟုတ်ဘူး’
‘မမဗန်က စာထဲမှာ သေချာရေးထားတာဘဲ . . စကားဝှက်က သစ်ကုလားအုတ်ဥ တဲ့’
‘ညီမလေးရဲ့ မမဗန်က အဲဒီလို ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေ ပြောမတဲ့လား စဉ်းစားပါဦး’
‘အာ . . မမဗန်က ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာတော့ ညစ်တီးညစ်ပတ် အရမ်းပြောတာဘဲ . .
ဒါပေမယ့် အခုဟာက ညစ်တီးညစ်ပတ် ဘယ်မှာ ဖြစ်လို့လဲ . သစ်ကုလားအုတ်ဥဘဲဟာကို’
‘အဲဒါကြီးကိုက ညစ်ပတ်နေတာ . .’
‘ဘယ်မှာ ညစ်ပတ်တာ ပါလို့လဲ . . သစ်ကုလားအုတ်ဥလေ’
‘ရှင်းပြရ . မကောင်းဘဲ ဖြစ်တော့မယ် . .’
‘ဘာမကောင်းတာလဲ . . ရှင်းပြ . . ရှင်းပြ . . ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး . . မှန်ရဲ့သားနဲ့ဟာကို’
အမယ် . .သူက စိတ်ဆိုးပြီး ခြေလေးဆောင့်ပြတယ် . .
‘မရှင်းပြတော့ပါဘူး . .တော်ကြာ ညစ်တီးညစ်ပတ်မောင်နှမလို့ နာမည်တွင်နေဦးမယ်’
‘ဟင် .. ဦးလေးက မမဗန်ရဲ့ အကိုလား .. ခွိ ခွိ . . သမီးက ဒရိုင်ဘာအောက်မေ့လို့ . .
အိမ်ထဲဝင်ပါဦး .. အားမနာပါနဲ့’
ကိန် . . ကျွန်တော့်ကိုများ ဦးလေးတဲ့ . .
သူ့ထက်ကြီးလှမှ လေးနှစ်ပေါ့ . .
ခြံတံခါးကို သော့ဖွင့်ပေးရင်း သူကဆက်ပြောတယ် . .
‘အထဲလာပါ ဦးလေးရယ် . . ကစ်ကစ်က တစိမ်းတွေ့ရင် နည်းနည်း ကိုက်တာကလွဲလို့ သဘောကောင်းပါတယ် . .’
အဲ .. သူ့ဟာက .. ပုဆိုးကတောင်းကျိုက်ပြီး ပြေးရမယ့် အပေါက်မျိုး . .
‘ရပါတယ် . . အကိုကလည်း ကိုက်တတ်တဲ့ခွေးဆို အမြီးကကိုင်ပြီး မြေကြီးနဲ့ပေါက်ထည့်လိုက်တာဘဲ’
ကျွန်တော့်ကို ဦးလေး ခေါ်လို့ ကျွဲမြီးတိုနေတာနဲ့ ဘု ပြောလိုက်တယ် . .
‘ဟား ဟား . . အဲဒါဆိုရင်တော့ အမက ဦးလေးကို ပြန်ကိုင်ပေါက်လိမ့်မယ် . .
ကျွန်တော်ပြောတာကို သူက ရီစရာလုပ်ပစ်လိုက်တယ် . .
ဧည့်ခန်းထဲရောက်တော့ . . စားပွဲပေါ်က မျက်မှန်လေးကို ကောက်တပ်လိုက်ရင်း . .
‘အဲတော့ . . ခုနက ခြံဝမှာ မှောင်နေတာနဲ့ ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး . .
အကိုက . ဟီး . . ငယ်ငယ်လေးဘဲ ရှိသေးတာဘဲ . . ဦးလေးလို့ ခေါ်မိတာ စိတ်ဆိုးနဲ့နော်’
‘ရပါတယ် . . အထင်မှား အမြင်မှား ဆိုတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်’
ကျွန်တော် နည်းနည်း ကျေနပ်သွားလို့ လေပြေထိုးလိုက်တယ် . .
ဟုတ်တယ်လေ . . နို့မို့ဆို ရွယ်တူကောင်မလေးက ဦးလေးခေါ်တာ ဘယ်လောက် အခံရခက်သလဲ . .
နောက်ပြီး ဒရိုင်ဘာ အောက်မေ့လို့တဲ့ . .
‘စကားဝှက်အကြောင်းရှင်းပြပါဦး . . ဘာညစ်ပတ်တာပါနေလို့လဲ’
အဲယားကွန်းကို အရှိန်မြှင့်လိုက်ရင်း သူက မေးတယ် ..
‘မရှင်းပြတော့ပါဘူး . . ရှုပ်ကုန်ဦးမယ်. . မမှန်ရင်တော့ မပေးနိုင်ဘူးနော်’
‘အဲဒီ မမှန်တာကို သိချင်လို့ ရှင်းပြပါဆို . . ဘာမှ မရှုပ်ပါဘူး .. ရှင်းပြ’
‘ဖြစ်သေးပါတယ် . . မမဗန် အကိုရယ်’
‘မနောက်ပါနဲ့ . .’
‘နောက်ပါဘူး . . ရှင်းပြ’
‘အပြစ်မဆိုပါဘူး . . သမီးက သိချင်လို့ မေးတာဘဲဟာ’
‘ကဲ .ဖြစ်ရင်လည်းရှင်းပြမယ် .နောက်ပြီးမှ ဘာဘာ ညာညာ မပြောနဲ့’
‘မပြောပါဘူး . .’
‘ပြီးရော . . ဥ ကို ဘယ်သူက အု သလဲ’
‘ကြက်ဥကို ကြက်မကြီးက အု တာပေါ့’
‘အေး . . အဲဒါ လိုရင်းဘဲ . . ဒါကြောင့် စကားဝှက်ကမှားလည်းမှားတယ် ညစ်လည်း ညစ်ပတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့’
‘အွန် . . ဘာမှလည်း မဆိုင်ဘူး ..’
‘ဆိုင်တယ် . ဆိုင်တယ် . .နော် . .သေချာပြန်စဉ်းစားဦး . .
မမှန်လို့ကတော့ လုံးဝပေးလို့ မဖြစ်ဘူး . .’
‘ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဆိုင်နေရတာလဲ . . သမီးက အရိပ်ပြလို့ အကောင်မမြင်ဘူး . .
အကောင်လိုက်ကြီး ပြမှ ရေးရေးဘဲ မြင်တာ’
‘အင်း . . ယုံပါတယ် . .ရေးရေးဘဲမြင်လို့ ခုနက ဦးလေးလို့ ခေါ်တာပေါ့နော်’
‘ဟီး ဟီး . .ဆောရီးပါ အကိုရယ် . ဥအုတဲ့ အကြောင်းလေးတော့ ရှင်းပြပါဦး’
‘ကဲ .. သစ်ကုလားအုတ်က ဘယ်လို အကောင်ကြီးလဲ’
ကျွန်တော် နည်းနည်း စိတ်မရှည်ချင်တော့တာနဲ့ ငေါ့တော့တော့ မေးလိုက်တယ် . .
‘လည်ပင်းအရှည်ကြီးနဲ့ . . ကိုယ်လုံးမှာလည်း အပြောက် အပြောက်တွေနဲ့’
‘အဲဒီကောင်တွေက ဥကပေါက်သလား . အကောင်လိုက်မွေးသလား’
‘အကောင်လိုက်မွေးတယ်လေ . . အဲဒါ ညစ်ပတ်တာ ဘာပါလို့လဲ’
‘အန် . . အကောင်လိုက်မွေးတယ်ဆိုတော့ ဥ မအုဘူးမဟုတ်လား’
‘ဥမအုရင် သစ်ကုလားအုတ်ဥ ဆိုတာ အမက အု နိုင်ပါဦးမလား’
‘အေး . .အမက ဥမအုလို့ အမရဲ့ဟာ မဟုတ်ရင် သစ်ကုလားအုတ်ဥ ဆိုတာ အထီးရဲ့ ဟာပေါ့ . .
ဒါကြောင့် ညစ်တီးညစ်ပတ် စကားဝှက် ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတာ’
ကျွန်တော်က စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပြောချလိုက်တယ် ..
သူက မျက်နှာလေးနီပြီး ရှက်သွားလေရဲ့ . .
ကျွန်တော်လည်း ပြောတုန်းက ပြောပြီး . . အခုမှ ရှက်လိုက်တာ . .
မှားပြီ . . မှားပြီ . . ဒွတ်ခတော့ ရောက်ပြီ . .
ငါ့ကို ပါးထရိုက်ရင် ခက်ရချည်ရဲ့လို့ စိတ်ပူမိသေးတယ် . .
နှစ်ယောက်စလုံး ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ကြမ်းပြင်ကြီးကို ငုံ့ကြည့်နေကြတယ် . .
စကားလည်း မပြောကြဘူး . . လှုပ်လည်း မလှုပ်ကြဘူး . .
ခဏကြာတော့မှ သူက . .
‘မေးလ် ထဲမှာ ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ် . .’
တုံးတိတိပြောပြီး အိမ်ထဲကို ၀င်သွားတယ် . .
ကျွန်တော်လည်း သက်ပြင်းကြီးချပြီး . . ဘယ်လိုပြန်ပြောရပါ့မလဲလို့ စဉ်းစားနေတယ် . .
မပြောပါဘူးဆိုတာကို ရှင်းပြ . ရှင်းပြ ဆိုတာနဲ့ ရှင်းထည့်လိုက်တာ ရှုပ်ကုန်တာဘဲ . .
တော်ပြီ . .တော်ပြီ . .နောက်တစ်ခါ ပို့ခိုင်းရင် မပို့ပေးတော့ဘူး . .
ညီမလေးကို နင့်ဟာနင် နေကောင်းမှပို့တော့ဟာ လို့ ပြောမယ် . .
ကျွန်တော် ချွေးပြန်နေတုန်း . .မေဓါဝီ ထွက်လာတယ် . .
‘သိပြီ . သိပြီ . . စကားဝှက် အမှန်က ငှက်ကုလားအုတ်ဥ’
သူက ပြုံးပြုံးလေး ပြောတယ် ..
‘ဟုတ်တယ် . . ခုမှ မှန်ပြီ . .ရော့ . . လက်ဆောင်’
ကျွန်တော်ကလည်း ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးလိုက်ပြီး သူ့ကို ပေးလိုက်တယ် . .
ညီမလေးကလည်း ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ဒီလို တလွဲတချော်ဖြစ်မယ့် ဥ ကို
စကားဝှက်လုပ်ရတယ် မသိဘူး . .
‘သမီးက ကုလားအုတ်ကိုမှတ်ထားတာ . . သစ်ကုလားအုတ်နဲ့ ငှက်ကုလားအုတ်
နည်းနည်းလေး လွဲသွားတယ် .. ဟီး’
လက်ဆောင်ထုပ်လေးကို ဖြည်ရင်း သူက ပြောနေတယ် . .
‘မေဓါဝီက စာရေးဆရာမဆို . . ဘာလို့ မှားရတာလဲ’
‘စာရေးဆရာမလည်း လူထဲက လူဘဲဟာ . . အမှားတော့ရှိမှာပေါ့ . . အကိုရယ်’
အင်း . .ကောင်းပါ့ . . မှားတာကလည်း တစ်ကယ့်ဟာကိုမှ မှားရတယ်လို့ . .
စကားဝှက်ဆိုတာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲနော် . .
‘ဟာ . . ကြိုက်တယ် . . ကြိုက်တယ် . . ဒါကြောင့် မမဗန်ကို ချစ်နေရတာ . .’
သူက ၀က်ဝံရုပ်ကြီးတွေ့တော့ သဘောတွေ ကျနေလေရဲ့ . .
နောက်ပြီး ညီမလေး စာအုပ်ထဲမှာ အမှတ်တရ လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ် . .
ကျွန်တော် သူ့ဆီက ပြန်လာတော့ သူ့ရဲ့ မျက်နှာလေးကို မြင်ယောင်ပြီး သူနဲ့တွေ့ရတာကို ကျေနပ်နေမိတယ်
ဒီလိုတွေ့ရအောင် ဖန်တီးပေးတဲ့ ညီမလေးကိုလည်း ကျေးဇူးတွေ တင်နေမိတယ် . .
ဒါပေမယ့် သစ်ကုလားအုတ်ဥ အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်မိတော့ အိပ်မက်က လန့်နိုးသလို .
ဗြုန်းကနဲ ရှက်တဲ့စိတ်က ၀င်လာပြန်ရော . .
တော်ပြီ နောက်တစ်ခါဆို ပို့မပေးတော့ဘူးဆိုပြီး ဖြစ်ပြန်ရော . .
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲရှက်ရှက် . .မေဓါဝီလို ချောချောလှလှလေးတွေဆီ ထပ်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ . .
ဂေါ်မစွံလူပျိုကြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ နှလုံးသားက မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး သွားချင်နေလေရဲ့ဗျာ . .
ပြီးပါပြီ . .
ညီမလေး မေဓါဝီရေ . .
ရေးရင်း ရေးရင်းနဲ့ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်တယ် မသိပါဘူးကွယ် . .
ဇာတ်လမ်းက အဲဒီလို အဆုံးသတ်သွားတယ် . .
မမကို စိတ်မကောက်ပါနဲ့နော် . .
ရေးဦးလေ. .ရေးဦးလေ ဆိုပြီး တဖွဖွ ပြောနေတဲ့ ညီမလေးအတွက် မမရဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်
အမှတ်တရ ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့ကွယ် . .
ချစ်ညီမလေး ပျော်ရွှင်စွာ ရီမောနေနိုင်ပါစေ . .
မမ သ စ ဖ က ၆
Posted by မေဓာဝီ at 4:50 AM
အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ရယ်ရတယ်။
11/16/2006 10:17 AM
ကိုရီးယား Romance ကားလေး ကြည့်နေရသလိုဘဲ။ ကောင်လေးကလဲ သေသွားတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေက ရုပ်ရှင်တွေ ထက် ပိုပြီး ဆန်းကျယ်တတ်၊ ရင်နင့်စရာကောင်းတတ်ပါတယ်ဗျာ။
11/17/2006 1:26 AM
I read your bolgs almost everyday.You are good writer. if you don't mind tell me name of (TZL, Vampire6, tharsoe)are same person or not..just want to know.
11/17/2006 3:48 AM
ကျမရဲ့ ဘလော့ကို အမြဲဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မခိုင်..။
TZL နဲ့ vampire6က အတူတူပါပဲ။ သားဆိုးကတော့ သတ်သတ် တယောက်ပါ။
11/17/2006 5:04 AM
see you in yangon.
စာနှာပါတယ်ဗျာ။ တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေ ရှိလို့ပါ။
11/18/2006 7:35 PM
စာနာလို့ရေးတာ (ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး) -ှ ဟထိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်။
11/18/2006 7:36 PM
မမေ မမဗန် ရှိတော့ဘူးလားဟင် ညလေး တကယ်မသိတာပါ၊ သူက အရမ်းခင်ဖို့ကောင်းသလို ပလန်းနက်ဖိုရမ်မှာ သူရေးတဲ့ ဟာသတွေ အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ညလေးနဲ့လဲ ဖုန်းပြောဘူးတယ် သူ့ကိုယ်သူ မမဗန်ရဲ့ အစ်ကိုဆိုပြီးတော့။ ပြီးတော့ မေးလ်ပို့တိုင်း ရီစရာတွေ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု အမြဲပြောတတ်တဲ့သူပါ။ စိတ်မကောင်းပါဘူး... တကယ်ပါ နောက်ပိုင်း ကွန်ပျူတာမသုံးရလို့ အင်တာနက်ထဲ မ၀င်ရတော့ပေမယ့် အမြဲသတိရနေတဲ့သူတွေထဲမှာ မမဗန်လဲ အပါအ၀င်ပေါ့။ အရမ်းစိတ်ထားကောင်းတဲ့ မမဗန်ပါပဲ။ ညလေးက သူ့ကို အမြဲတန်း သစ္စာဖောက်ကောင် လို့ခေါ်တယ်လေ... အင်း ရေးရင်းနဲ့ ငိုချင်သွားတယ်....
ဒီကနေပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ မမဗန်တစ်ဖြစ်လဲ KoTZL တစ်ယောက် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ....
1/21/2007 12:26 PM